सिन्धुमा कांग्रेस जिताउन म सक्रिय रहन्छु : विनोद लामा (सहसंयोजक तरुण युवा परिचालन समिति प्रतिनिधिसभा १) — Motivate News
Posted on November 16, 2017 by motivate news
तपाइलाई पार्टीले प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर १ को तरुण युवा परिचालन समितिको सहसंयोजकमा मनोनयन गरेको छ, यसमा तपाईको भूमिका कस्तो रहन्छ ?
म सानै उमेरदेखि राजनीतिमा लागेको ब्यक्ति हुँ । मलाई राजनीतिमा कस्तो रणनीति चाहिन्छ भन्ने कुराको राम्रो ज्ञान छ । यो देखेर नै नेपाली कांग्रेस क्षेत्रीय कार्यसमितिले मलाई सहसंयोजक जस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको हो । विशेषगरी यही मंसिर १० गते हुने निर्वाचनको लागि युवालाई मतदाताको मन जित्ने काममा खटाउने, हाम्रो मतदाताहरुलाई हरेक कुरामा सहयोग गर्ने र पार्टीले लगाएको अन्य काममा म पुरै जिम्मेवारीका साथ सक्रिय रहन्छु । हाम्रो युवा तरुण साथीहरुलाई एकढिक्का बनाएर सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको प्रतिनिधिसभा १ अन्तर्गत पर्ने प्रदेश सभा १ र २ मा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई विजयी गराउनु मेरो प्रमुख भूमिका रहन्छ ।
आसन्न निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई विजयी गराउन कस्तो रणनीति तय गर्नुभएको छ ?
यस क्षेत्रका मतदातालाई नेपाली कांग्रेसको विचार र सिद्धान्तबारे जानकारी गराउने, गाउँघर गएर उनीहरुलाई परेको समस्याको बारेमा छलफल गर्ने, यस क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसले गरेको विकास निर्माणको कार्यलाई मतदातासामु पु¥याउने, अन्य राजनीतिक दलले निर्वाचनको समयमा मतदातालाई कसरी झुक्याउछन् भन्ने कुरामा सचेत पार्ने, यसअघिका निर्वाचनमा धेरै मत बदर भएकाले सही तरिकाले मतदान गर्न सिकाउने तथा हाम्रा मतदाताहरुलाई हरेक प्रकारले सुरक्षा दिन हामीले विशेष रणनीतिक योजनताहरु बनाएका छौं ।
तपाईले लामो समय माओवादी केन्द्र सिन्धुपाल्चोकको जिम्मेवार पदमा रहेर काम गर्नुभयो निर्वाचनको मुखमा नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्नुभयो किन ?
हो, मैले नेकपा माओवादी केन्द्रको जिम्मेवार पदमा रहेर काम गरेकै हो । मैले जनमिलिसियादेखि कमाण्डरसम्म भएर काम गरेको पनि हो । तत्कालीन समयमा हाम्रो परिवार अलि शिक्षित र राप्रपासँग आवद्ध भएकाले हामीमाथि अनेक प्रकारका दवाव थिए । मेरो ठुलो बुबाको परिवारलाई माओवादीले विस्थापित गरेरै छाड्यो । हामी ज्यान बचाउनकै लागि माओवादी बन्न बाध्य भएका हौं । सयमक्रमसँगै माओवादीले सबैलाई समेटेर विकास गर्छ भन्ने आसमा बसेका हौं । यसअघिका निर्वाचनहरुमा वाइसिएल इन्चार्जको भूमिका सक्रियतापूर्वक निर्वाह गरेको हुँ । अग्नि प्रसाद सापकोटालाई जिताउनमा मेरो ठुलो योगदान छ । तर के गर्नु देश र जनतालाई विकास र समृद्धि दिने मिठो नारा बाहेक माओवादीले केही गर्न सकेन । यहाँकै कुरा गर्ने हो भने नेकपा माओवादी केन्द्र भनेको अग्नि सापकोटाको निजी सम्पत्ति जस्तै भएको छ । हरेक कुरामा उनीहरुको हस्तक्षेप भएको हामीले सहेकै हौं । आफूमात्रै कमाउने कार्यकर्तालाई कुनै वास्ता नगर्ने, निर्वाचनको बेलामा मात्रै कार्यकर्ता सम्झने जस्ता कारणहरुले म माओवादी केन्द्र छोड्न बाध्य भएको हुँ । नेपालका कम्युनिस्ट सबै आडम्बरी मात्रै रहेछन् जनताको विकास उनीहरुलाई केही मतलब छैन । अर्को कुरा अबको समयमा कसैलाई पनि आदेशबाट चलाउन सकिँदैन । सबैलाई लोकतन्त्र चाहिन्छ । यो ब्यवस्थामा मात्रै हामी आफ्नो विकास र रोजाई अनुसारका काम गर्न सक्छौं मलाइ यस कुराले पनि प्रभाव गरेको हो । म विश्वका विविध देशहरु घुमेको छु । कम्युनिस्ट शासन भएका र लोकतान्त्रिक शासन ब्यवस्था भएका देशरुको विकासको गतिलाई पनि नजिकैबाट हेरेको छु । अबको समय भनेको लोकतान्त्रिक विचारधाराले मात्रै प्रश्रय पाउने समय भएको महसुस गरेर नै म नेपाली कांग्रेसमा लागेको हुँ । यस्तै अर्को कुरा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा विकास निर्माणको काम गर्ने र कार्यकर्ताहरुको संरक्षण गर्ने पार्टी भनेको नेपाली कांग्रेस नै हो । यसका नेता मोहन बस्नेत विकासप्रेमी नेता हो । अबको विकास नेपाली कांग्रेसले मात्रै गर्नसक्ने देखेर नै म नेपाली काग्रेसमा प्रवेश गरेको हुँ ।
वाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धनका युवाहरुबीच भिडन्त भएको भन्ने सुन्नमा आएको थियो वास्तविकता के हो ?
नेपाली कांग्रेसका युवाहरु कहिल्यै पनि हत्या हिंसा र आतंकमा विश्वास गर्दैनन् । जनताको मन जितेर मात्रै अगाडि बढ्न चाहन्छन् । हामीले मन जितेर, काम गरेर मत माग्छौं । हामी लोकतन्त्रवादीहरु सँधै शान्तिको पक्षमा रहन्छौं । सिन्धुपाल्चोकमा नेपाली कांग्रेसका विजय सुनिश्चित देखेर वाम गठबन्धनका उम्मेदवारहरु आत्तिएका छन् । उनीहरु कुन कुरालाई निहँु बनाएर हाम्रा तरुण साथीहरुलाई उत्तेजित बनाउन सकिन्छ भनेर अनेक तानाबाना बुनिरहेका छन् । अस्तिको घटना पनि त्यस्तै हो । हामी कसैलाई पनि हात हाल्न जाँदैनौं । तर अनेक बहानाबाजी र कुतर्क गरेर हाम्रा साथीहरुलाई हात हाल्ने दुस्प्रयास मात्रै भयो भने त्यसको तत्कालै कडा प्रतिवाद गछौं यो कुरा उनीहरुले रामोसँग बुझिराखे हुन्छ ।
तपाई चुनावीसभाहरुमा हरेक गाउँगाउँमा जानुभएको छ मतदाताहरुको चाहना कस्तो रहेको पाउनुभयो ?
म नेपाली कांग्रेसमा आवद्ध भएदेखि नै यस जिल्लाका धेरै गाउँघरमा भएका चुनावी सभाहरुमा सहभागी छु । सबै ठाउँहरुमा माओवादी र एमाले छोडेर नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्ने अत्यधिक भीड रहेको छ । मतादाताहरु सबै शिक्षित भइसकेका छन् । यस देशमा लोकतन्त्रवादीहरुको विजय भएमात्र आफ्ना मोलिक हकअधिकार सुनिश्चित हुन्छ कसैको आदेश र त्रासमा बस्नु पर्दैन भन्ने उनीहरुले रामैोसँग बुझेको देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसका सबै उम्मेदवारहरु विकासप्रेमी र युवा भएकाले पनि यहाँका मतदाताहरुले नेपाली कांग्रेसप्रति विश्वास गरेको वातावरण छ.